၇၆၁၃၁ သေစားသေစေသောသူသည်စစ်မြေပြင်ရှိမော်ကွန်းတိုက်များ။ Brick Fanatics
76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ
18 / 08 / 2021 19 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 402 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 76020 Knowhere Escape မစ်ရှင်, 76079 Ravager တိုက်ခိုက်မှု, 76080, 76080 Ayesha ရဲ့လက်စားချေ, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုတ်ခဲ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 2, Heist, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Marvel, Nebula, Peter Quill, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ယွန်ဒူး
01 / 08 / 2021 01 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 588 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, marvel ဒဏ္ဍာရီ, သေးသေးလေး, Nebula, ကြယ်စင်သခင်, စတား-သခင်ဘုရား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
21 / 05 / 2021 21 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 611 Views စာ0မှတ်ချက် 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, ၇၆၁၄၁ Thanos Mech, Thanos vs. 76170 သံက Man, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76196 Marvel ထွန်းပြက္ခဒိန်, ထွန်းပြက္ခဒိန်, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Black ကမုဆိုးမ, ကပ္ပတိန် Marvel, Lego, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel ထွန်းပြက္ခဒိန်, နစ်ခ် Fury, ကောလာဟလာ, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Thanos, Thor
28 / 11 / 2020 29 / 11 / 2020 ခရစ် Wharfe 841 Views စာ0မှတ်ချက် 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန်, 21317 Steamboat ဝီလီ, 75965 Voldemort ၏ထ, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2020, Lego, LEGO.com, US
ပို။ လက်မှတ်ရေးထိုး LEGO အစုံမှာရရှိနိုင်ပါ LEGO House စတိုးဆိုင်
26 / 10 / 2020 26 / 10 / 2020 ခရစ် Wharfe 738 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, 76122 Batcave: Clayface ကျူးကျော်မှု, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76148 Spider-Man Doc Ock vs., ၇၆၁၅၃ Avengers Helicarrier, 76157 Cheetah vs. Wonder Woman, ၇၆၁၆၁ ၁၉၈၉ Batwing, ၇၆၁၆၃ Venom Crawler, 76165 သံက Man သံခမောက်လုံး, 80012 မျောက်ဘုရင်က Warrior Mech, Batman, Dc, Lego, LEGO House, Monkie Kid
လက်မှတ်ထိုး LEGO အစုံ၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးယခုမှာရရှိနိုင်ပါပြီ LEGO House Billund, Denmark ၌တည်၏။ LEGO ဒီဇိုင်း
၂၀၂၀ တွင်သင် ၀ ယ်သင့်သည့် LEGO ၅ ခုသည်အသေးစားပုံများဝယ်သင့်သည်
15 / 10 / 2020 15 / 10 / 2020 ခရစ် Wharfe 2570 Views စာ0မှတ်ချက် 75159 မရဏစတား, ၇၅၂၄၄ Tantive IV, 75965 Voldemort ၏ထ, 75977 Junkrat & Roadhog, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, Lego, မကြာခင်အနားယူတော့မည်
LEGO အစုံလိုက်များစွာသည် ၂၀၂၀ အကုန်တွင်အနားယူရတော့မည်ဖြစ်ရာသင်ရွေးချယ်သင့်သည့်ငါးခုကိုရွေးချယ်လိုက်သည်
LEGO အသစ်ပေါ်မှ VIP ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ Marvel Avengers: Endgame အစုံ
01 / 04 / 2019 06 / 04 / 2019 ဂရေဟမ် 920 Views စာ0မှတ်ချက် 76123 Captain America: ပြင်ပတိုက်ခိုက်မှု, 76124 စစ်ပွဲစက် Buster, 76125 သံက Man သံမဏိခန်းမ, ၇၆၁၂၆ Avengers Ultimate Quinjet, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း, shop.LEGO.com, VIP
ဒီနေ့ LEGO ၏လွှတ်ပေးရေးမြင်ကြပြီ Marvel Avengers: အသစ်ထွက်ပြီနှစ်ခုနှင့်အတူ Endgame အစုံart of
Lego Marvel Avengers: Endgame အစုံများကိုယခုရရှိနိုင်ပြီ
01 / 04 / 2019 01 / 04 / 2019 ဂရေဟမ် 1380 Views စာ0မှတ်ချက် 76123 Captain America: ပြင်ပတိုက်ခိုက်မှု, 76124 စစ်ပွဲစက် Buster, 76125 သံက Man သံမဏိခန်းမ, ၇၆၁၂၆ Avengers Ultimate Quinjet, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ
ဒီနွေရာသီရဲ့အကြီးမားဆုံးသော LEGO ဖြစ်လာမည့်အရာသည်မကြာမီထွက်ပေါ်လာတော့မည်ဖြစ်သည် Marvel Avengers: Endgame အစုံများကိုယနေ့စတင်လိုက်ပါပြီ
LEGO ဘာလုပ်လဲ Marvel Avengers: Endgame အစုံကဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းပြသလား။
06 / 03 / 2019 06 / 03 / 2019 ဂရေဟမ် 1668 Views စာ0မှတ်ချက် 76123 Captain America: ပြင်ပတိုက်ခိုက်မှု, 76124 စစ်ပွဲစက် Buster, 76125 သံက Man သံမဏိခန်းမ, ၇၆၁၂၆ Avengers Ultimate Quinjet, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ
Brick Fanatics မကြာသေးမီကထုတ်ဖော်ပြသ LEGO ကိုကြည့်သည် Marvel Avengers: Endgame ကသူတို့ဘာတွေထုတ်ဖေါ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်တယ်